XOG:- Madaxweyne Xasan Sheekh oo raali gelin iyo xaal marin isugu daray nabadoon caan ah (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Madaxweyne Xasan Sheekh oo raali gelin iyo xaal marin isugu daray nabadoon caan ah (AKHRISO)
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan olole xoogan ugu jira sidii dib loogu dooran lahaa xilka uu haatan haayo ayaa xaal marin iyo raali-gelin isugu daray nabadoon C/laahi Geedi Shadoor, kadib markii uu nabadoonka dhowr jeer oo hore xad-gudub ka tirsaday.
Warar hoose oo aynu helnay ayaa inoo sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh uu lacag xaal marin ah iyo raali gelin isugu daray Nabadoon C/laahi Geedi Shadoor, oo tan iyo dhismihii maamulka Galmudug uu khilaaf weyn ka dhaxeeyay.
Nabadoon C/laahi Shadoor ayaa la sheegay in mudooyinkii ugu dambeysay uu waday qorshe ah in madaxweyne Xasan Sheekh aanan dib loo soo dooran.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xaal-marintaas iyo raali gelintaba bixiyay kadib markii sida la sheegay uu cadaadis kala kulmay odayaasha dhaqanka ee beeshiisa.
Waxay odayaashaas u sheegeen in madaxweyne Xasan Sheekh aysan suurta-gal u ahayn in Odayaasha oo labo u kala qeybsan inuu markale tartan madaxweyne galo.
Arrintaasi ayaa keentay in madaxweyne Xasan Sheekh uu lacag badan ku harqiyo Nabadoon C/laahi Geedi Shadoor, waxaana halkaas si kumeel gaar ah loo soo afjaray xurguftii labada nin.
Si kastaba ha ahaatee, Hoteelka City Palace ee magaalada Muqdisho ayaa maalintii shalay waxaa lagu qabtay xaflad si heer-sare loo soo agaasimay oo ay kasoo qeyb-galeen in ka badan 1,500 qof oo isugu jiray siyaasiyiin, aqoonyahano,dhalinyaro, odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada ee beelaha Mudulood.
Xafladaasi ayaa sidoo kale ka dhex-muuqday Nabadoon C/laahi Geedi Shadoor oo haatan si buuxdo u taageersan musharaxnimada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markale u tartami doono doorashada dalka ka dhici doonto daba-yaaqadda sanadkaan.